Buy 2-Aminoisoheptane (28292-43-5) HPLC ≥98% | AASraw
/ Products / Ny hafa / 2-aminoisoheptane (28292-43-5)
Rating: SKU: 28292-43-5. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny 2-Aminoisoheptane (28292-43-5), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
2-Aminoisoheptane, fantatra ihany koa amin'ny hoe DMHA na Octodrine, dia nanjary mpiorina malaza amin'ny fampiofanana mialoha sy ny mpandoro tavy hatramin'ny nanombohan'ny taona 2017. Famporisihana iray izay inoana fa hanatsara ny haavon'ny angovo anananao.2-Aminoisoheptane dia mitovy amin'ny DMAA. Hita voajanahary ao anatin'ny hoditry ny Walnut Tree English (AKA. Juglans Regia)….
2-aminoisoheptane karazana fototra
Formula Molecular: C7H17N
Molekular lanja: 115.22
Famaritana anarana: 2-aminoisoheptane
Brand Names: DMHA, Octodrine
Ny 2-Aminoisoheptane, toy ny fanentanana vaovao dia ampiasaina amin'ny fampiofanana amin'ny fanatanjahan-tena miaraka amin'ny menaka matavy. Izany rehetra izany dia noho ny fiantraikany roa amin'ny fiakaran'ny angovo sy ny fanakanana ny fialan-tsasatra.
Fanatsarana ny angovo
2-aminoisoheptane (Octodrine) dia mahazo vahana haingana amin'ny tanjaky ny angovo sy ny toetrany. Izany no nahatonga azy ho malaza indrindra ho toy ny famenon-tsakafo mialoha satria manana toetra marobe izay miantoka anao amin'ny fanararaotana indrindra amin'ny fampihetseham-batanao: ny haavon'ny angovo voatsara (manamora ny fanosehana ny tenanao sy ny fivezivezena bebe kokoa, izay midika fa may kaloria bebe kokoa!) (angovo be dia be tsy midika na inona na inona raha tsy te hanana fanatanjahan-tena ianao), sy ny fihatsaran'ny fihetseham-po (rehefa mahatsapa tsara ianao mandritra sy aorian'ny fampihetseham-batanao - dia azo inoana fa hiverina ianao hanao izany rehetra izany. indray). Ny tombony sasany dia ny fandeferana amin'ny fanaintainana 5,6, ny tahan'ny fihenan'ny 5,6, ary ny fanatsarana ny bronchodilation 3b, 4b, 5b - izay mora raisina rehefa manavesatra, manome hery amin'ny alàlan'ny kilasy mihodina na HIIT, na koa ny ankizy sy ny ankizy mifanditra. trano feno raharaha ao an-trano.
Ny iray amin'ireo faritra tsara indrindra momba ny 2-aminoisoheptane (Octodrine) dia ireo tombontsoa ireo dia mitombo haingana noho ny molekiolany. Ny fampidirana vondrona methyl iray amin'ny alfa karba dia mampitombo ny toetra amphiphilian'ny fitambarana - izay mahatonga azy io ho lozaka sy lipidin'ny lipida. Ny fitomboan'ny lipidia dia mampitombo ny fahafahany miditra amin'ny ati-doha amin'ny ati-doha, izay ahafahany mampihatra ny fiantraikany eo amin'ny fifantohana sy ny euphorique.8,9
Ny soa entin'ny herinao
Ny 2-aminoisoheptane (Octodrine) dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fihenan-danja noho ny fahafahany mampihena ny filan'ny nofo ary koa manatsara ny toe-tsainao amin'ny fampitomboana ireo hormonina tompon'andraikitra amin'ny mahatonga anao hanana "fahatsapana tsara" 4b, 5b (veloma amin'ny fotoam-pivoriana vokatry ny fihenjanana sy kivy!).
Tombontsoa manatsara ny toetran'ny 2-aminoisoheptane (Octodrine) dia avy amin'ny fahafahany mampitombo ny haavon'ny dopamine sy ny norepinephrine, izay tompon'andraikitra amin'ny fampitomboana ny euphoria sy ny fifohazana.3b, 4b, 5b, 6b. Mitovy amin'ny rafitra sy mifandraika amin'ny metabolika amin'ny neurotransmitters monoamine kilasika, 2-aminoisoheptane (Octodrine) dia afaka mampihetsika ny receptor 1 izay misy amine, ary manakana vetivety ny famerenana ny dopamine sy ny norepinephrine ao amin'ny nerveul presynaptic - manatsara ny "punch" sy ny fahaizany maharitra.
Ankoatr'izay, mpampiasa ny DMHA dia nitatitra ny dian-drà faran'izay mafy ary nampihena ny reraka, ka nahafahan'ireo mpampiasa nahazo tombontsoa lehibe avy amin'ny fampiasana azy ireo.2-aminoisoheptane (Octodrine) koa dia miteraka faniriana hanao zavatra. Araka ny efa voalaza dia manaisotra ny famotsorana ny dopamine i DMHA. Ny dopamine dia mitarika ny lanjan'ny motivation sy ny fanoloran-tena manaraka. Ny faniriana hanatanteraka zavatra iray dia ny faniriana. Mety maniry ny hanatratra zavatra iray ny olona iray, fa raha miatrika fihantsiana eny an-dalana izy ireo, dia mety hilavo lefona izy ireo. Na izany aza, raha misy olona manana faniriana, dia tsy hanalavitra ny antony izy ireo mandra-pahatratratrarany ny zavatra nokasainy hatao. Soa ihany, dopamine, ny famotsorana azy amin'ny alàlan'ny famoahana DMHA, dia manome toky fa samy manana ny antony manosika sy ny sitrapony hanatratrarana ny tanjonao ianao.
Ny fampifandraisana ireo vokatra niainana tamin'ny fampiasana DMHA dia manome ny fanohanana farany amin'ny fiofanana, noho izany ny fampidiran-danja amin'ny fampiroboroboana isan-karazany amin'ny fampisehoana, ny famatsian-tsakafo sy ny zava-pisotro misy alikaola.
Inona ny dingan'ny 2-aminoisoheptane
Tsy mbola misy ny fanolorana ofisialy ofisialy azo omena ity zavatra ity. Sarotra ihany koa ny milaza fa ny ankamaroan'ireny orinasam-pampandrosoana ireny dia ampiasaina satria efa mipaka amin'ny vokatra. Na izany aza dia mety ho azo antoka ny filalaovana zavatra eo amin'ny 100 mankany 300mg.
Tadidio foana fa azo ampiasaina ny 2-aminoisoheptane alohan'ny fampiofanana, fa afaka ampiasaina mandritra ny andro. Koa satria mendri-piderana izany, dia miezaka ny tsy hampiasa azy alohan'ny hatory, satria mety hanakorontana ny fialan-tsasatra ara-dipoavatra.
Mba hanararaotra ny toetra mampiavaka ny 2-aminoisoheptane (DMHA), dia ampiasaina faran'izay kely ny 15-30 minitra alohan'ny hamitana azy. Azo ampiasaina mandritra ny andro eo anelanelan'ny sakafo ny fampiasana 2-aminoisoheptane (DMHA), raha ampiasaina amin'ny ankapobeny noho ny fananany fanodinkodiniana. Na izany aza dia manoro hevitra isika raha tokony hampiasa io zavatra io amin'ny faran'ny tolakandro na amin'ny takarivam-pitokanana, satria mety hanakana ny fahafahanao hatory.
Ny fomba fiasa 2-aminoisoheptane
Ny 2-Aminoisoheptane (DMHA) dia miasa amin'ny endriny mitovy amin'ny DMAA malaza. Amin'ny fomba fiasa ara-drafitra, ny fifandraisana ara-structural 2-Aminoisoheptane (DMHA) dia fantatra amin'ny hoe mpanelanelana monoamine. Ireo no voka-dratsiny izay ahafahana mampitombo ny isan'ny monoamines. Ireo no dopamine sy noradrenaline. Izy io dia miasa amin'ny fanamafisana ny dopamine sy ny nordrenaline fikarakarana ary ny fihenan'ny tsimokaretina amin'ny alàlan'ny fampidirana amn'ny tsipika amine mifandraika amin'ny amine. Izany dia tsy manakana ny fahaiza-manaon'izy ireo amin'ny mpitsabo azy mitazona ireo monoamines ireo. Izany no antony mahatonga anao hanana fiantraikany maharitra sy mahery fihetsika. Ny toetra iraisana iray hafa hita eo amin'ny DMAA sy 2-Aminoisoheptane (DMHA) dia ny fampiarahana ny methyl group amin'ny alfa karba izay mametra ny fiantraikan'ny monoamine oxidase (MAO), mampitombo ny endriky ny amphiphil ity ingredient ity, ary koa ny firaisan'ny catecholamine Ireo transporters.Izao no midika fa ny antsasaky ny fiainana an-jatony dia ho ela kokoa, handalo haingana kokoa ny ati-doha amin'ny ati-doha, ary hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fampihetseham-po.
Ny fanentanana vao haingana dia nivoaka tao amin'ny nosy bozaka ao 2016! Io no 2-aminoisoheptane, ny endriny farany amin'ny DMAA mba hampiroborobo ny angovo sy hanesorana ny fiankinan-doha. Ny fanatontosana ny taom-pilalaovana ny taom-piofanana dia lasa mifantoka amin'ny karazana biriky sy atleta an'arivony.
Ity misy voka-dratsy mety hitranga amin'ny 2-aminoisoheptane:
Herisetra amin'ny angovo
Dypsnea (tsy fahampian-tsakafo)
2-aminoisoheptane Raw Powd
Ny 2-aminoisoheptaneHafatra ny fiantraikany
Koa satria ny 2-aminoisoheptane dia vaovao amin'ny tsena ara-tsakafo ara-panatanjahan-tena, dia tsy misy vokany ratsy ny tatitra. Azontsika ampitahaina amin'ny DMAA. Ny vokatra hafa tsy voavonjy dia mety hitranga miaraka amin'ny dosage avoakan'ny 2-aminoisoheptane, ohatra, ny tebiteby mafy, ny fiakaran'ny tondra-drano ary ny fahasarotan'ny fofona. Tahaka ny fikajiana rehetra, tsara kokoa raha manomboka amin'ny doka ambany kokoa ianao mba hahazoana ny fandeferanao sy ny fahatsapanao ny singa.
Ahoana ny fividianana 2-aminoisoheptane avy any AASraw
17Î ± -Hydroxyprogesterone Acetate Powder (302-23-8)
17a-Hydroxyprogesterone Acetate Powder (302-23-8)
Ethisterone Powder (434-03-7)